Home News Shaqaale shirkadeed oo lagu dilay magaalada muqdisho
Kooxo hubeysan ayaa Goordhow Isgoyska Bakaaraha ee Magalada Muqdisho waxa ay ku dileen laba Nin oo la sheegay inay ahaayeen Shaqaale Shirkadeed.
Goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen in Rag bustoolado ku hubeysnaa ay labada nin toogasho ku dileen kadibna ay baxsadeen.
Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya ayaa gaaray goobta uu dilka ka dhacay,waxaana socda howlgallo ay ciidamadu wadaan.
Waxaa hakad ku jira Dhaq dhaqaaqa Ganacsi ee Goobihii ka agdhawaa Isgoyska Bakaaraha,waxaana weli la ogeyn cida ka dambeysay dilkaas.
Maalin kahor ayay aheyd markii Isgoyska Bakaaraha lagu dilay Nin ku labisnaa Dareeska ciidamada Dowladda kaas oo la sheegay in uu ka tirsanaa Ciidamada Guutada 14-ka Octoober.
Previous articleMasuul sare oo katirsan Somaliland oo is casilay
Next articleGolaha Wasiirada Maamulka Galmudug oo la ansixiyay
Galmudug Iyo Ahlusunna oo ka Baxsaday Dabin Madaxtooyadda Lagasoo Maleegay!!